China Enwu Enwu Enwu China Manufacturers & Suppliers & Factory
Enwu Enwu Enwu - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Enwu Enwu Enwu)
Igwe Igwefoto Photocell 150W Led Street
Ụzọ anyị nwere 150W Led Street Light na Pole na SMD ada mgbawa na-enye ihe ọhụrụ 19500 Lumens elu mmepụta ìhè iji dochie 300W-400W MH. Photocell na-eme ka ìhè ọkụ ọkụ a na- acha na mgbede ma na-apụ n'ehihie. Mgbasa ọkụ na-ekpo ọkụ ka ọ dị jụụ ma hụ na karịa 50,000hrs na-adị ndụ. The 150w Exterior Dugara osisi...
Ufo High Bay na-enwu enwu ọkụ 150w
Ufo High Bay Led 150w na- anapụta ihe dị ịtụnanya 19500 lumens.This Ufo High Bay Led Lights 150w bụ IP65 waterproof maka ime ụlọ etiti ebe. The High Bay Led Fixtures 150w ájá dị nro na-eguzogide ọgwụ na-ehicha ma ọ bụ nkwụsị ihe nhicha na-ehicha. Ọdịdị nke elu ọkụ dị elu 150w dị elu nke dị mita ise na ise. Nke a a...
100w Mmiri na-enwu mmiri na-ekpuchi mmiri
100w Mmiri na-enwu mmiri na-ekpuchi mmiri 1. Na-adịghị ahụkebe Ụlọ ụlọ ikanam ọkụ 100w ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2. Na-adịghị mma ụlọ ụlọ ikanam 100w , mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. Na-adịghị ahụkebe 100w Wụnye Ìhè Ndị Ụlọ Ahịa bụ ihe...
100W Best Low Bay na-enwu ọkụ na-enweghị ọkwọ ụgbọala
1. Ejiri ire ọkụ na-egbuke egbuke ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2. Led Low Bay Pendant bụ IP65 waterproof maka n'èzí eji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. Ezigbo Ụlọ Ahịa Echere bụ ihe ọhụrụ mara mma. Obere na ibu na ibu, ogologo oge...
50w N'anyanwụ na-enwu gbaa
Ihe kwalite mode 50w N'èzí Solar Ìhè eletrik na ayama ume oru oma LEDs enye mma ihie gị n'ubi, na-emetụta ọtụtụ ọkọlọtọ 3 "gburugburu okporo osisi ya. Kwalite anyanwụ ogwe-enye oké ike n'ihi na nke a N'èzí Solar eletrik 6500lm, elu àgwà ihe mere nke a 50w 6500lm Ọdịdị na- ekpuchi mmiri nke IP65,...
75w 9750Ọbụrụ na-enwu enwu
Bbier 75w 9750Ọdịmpe ọkụ na -acha ọkụ na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke dị elu 130lm / watt, dochie 250W MH / HID / HPS. Nke a 9750Lumen Led Light Post Top nwere ezigbo heatsink imeziri maka 50000 awa nke ndụ. Nke a 75w Led Light Post Top Kwesịrị ịdị na-etinye 2-3 / 8 nke anụ ọhịa na anụ ọhịa 3 anụ ọhịa iji wụnye ọkụ...
30w 3900Ọbụrụ na-enwu enwu
Bbier 30w 3900Ọbụrụ na-enwu ọkụ Post Top bụ oke na-egbukepụ egbukepụ ọkụ dị ọkụ 130lm / watt, dochie 250W MH / HID / HPS. Nke a 3900Lumen Led Light Post Top nwere ezigbo heatsink imeziri maka 50000 awa nke ndụ. Nke a na-eme ka ìhè Post Post ahịa kachasị mma 30w kwesịrị ime 2-3 / 8 nke anụ ọhịa na anụ ọhịa 3 anụ ọhịa...
Enwu Enwu Enwu Enwu enwu enwu Enwu enwu na Photocell Egwuregwu Egwurugwu Enwu enwu maka ogige Egwuregwu Egwuregwu Egwu 640W Enwu Igwe Uhie Enwu n'igwe